Umkhiqizi nomhlinzeki we-China Bending Plywood | Roc
Ukusetshenziswa Kwezindlu / Amakhabethe
Okunye Ukusetshenziswa Okukhethekile
I-OSB (ibhodi ye-strand esuselwe)
I-ROCPLEX eguqa ipulangwe ekubumbeni okufunayo.
Faka umklamo omusha kumaphrojekthi wakho wezinkuni nge-ROCPLEX Bending Plywood.
Leli bhodi eliguquguqukayo ngokumangalisayo lizololonga cishe noma yimuphi umugqa ogobile. Ikhono layo lokuzivumelanisa nezikhombisi-ndlela okusanhlamvu okusanhlamvu noma okusanhlamvu kukwenza iphaneli eguquguqukayo yemiklamo eyinkimbinkimbi.
Esizeni sokusebenzela, i-ROCPLEX eguqa ipulangwe ingambozwa ngobubanzi obuningi bama-laminates noma ama-veneers asekelwa iphepha ngokubukeka okuqediwe okudingayo. Yisixazululo esifanelekile samakholomu agobile, amakhothamo, amakhabethe nefenisha ezindaweni zokuhlala noma ezentengiselwano… noma ikuphi lapho kudingeka khona ukusuka emaphethelweni aqondile.
Imininingwane ye-ROCPLEX bending plywood
Ukwakhiwa kwe-ply 3: I-Rotary ihlutshiwe ubuso bokhuni oluqinile nangemuva. Ubuso obuzacile obuzacile.
Ukwakhiwa kwe-5 ply: I-Rotary ihlutshiwe ubuso bokhuni oluqinile nangemuva. I-ply veneer ply yangaphakathi.
Ubukhulu: 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm noma uxhumane nathi ukuthola abanye osayizi.
Usayizi wePhaneli: 4 'x 8' okusanhlamvu okude noma okusanhlamvu okungu-8 'x 4'.
Ubuncane berediyasi: 12 ″ Ingakwazi ukuguquguquka ibe mincane, kepha izodinga amandla amakhulu. Zonke izingxenye zezingxenye kufanele "ziguqulwe" ngesandla ukufeza ukuguquguquka okuphezulu.
Ukusonga: Amapaneli angadinga ukuthungwa kwesiza.
Izicelo: Sebenzisa izinhlelo ezigobile ezizofakwa nge-laminate, veneers enamaphepha noma ezinye izinto ezijiyile. Amaphaneli awenzelwe ukusetshenziswa kwesakhiwo noma kwangaphandle.
I-formaldehyde-free: Yenziwe ngobuchwepheshe be-PureBond obususelwa ku-soy.
I-ROCPLEX eguqa ipulangwe yiphaneli eguquguqukayo yezinhlelo zokusebenza eziningi zokwakha lapho imigqa eqondile ingeke nje yenzeke. Ukuguquguquka okumangalisayo kwamapaneli we-ROCPLEX kukwenza kube yisixazululo esihle se:
Imiklamo yefenisha eyindilinga
IKhabhinethi eligobile liphela noma iziqhingi
Iziteshi zomsebenzi zokwamukela nezamahhovisi
Arches futhi arched casings
Amayunithi wamakholomu ayindilinga namakholomu
8 × 4 'cross okusanhlamvu emgqonyeni
4 × 8 'okusanhlamvu okude okugoba
Veneer Core Isikhumba somzimba omncane
ROCPLEX Ukugoba Plywood Inzuzo
* Amandla okugoba okuphezulu nokubamba kwezipikili okuqinile.
* Ngaphandle kokuphamba nokuqhekeka, ikhwalithi engaguquki.
* Ukwakhiwa komswakama nokwakhiwa okuqinile. Akukho ukubola noma ukubola.
* Ukukhishwa okuphansi kwe-formaldehyde.
* Easy to nail, wabona ukuzisika futhi imishini. ingasika amatshe ngezimo ezahlukahlukene ngokuya ngezidingo zokwakha.
* Ipulangwe lenziwe ngokhuni lwangempela.
ROCPLEX Ukugoba Plywood Padking Futhi Iyalayisha
Ngenxa yokutholakala kwezinto ezibonakalayo kanye namandla okusila, i-ROCPLEX ingahlinzekwa ngokucaciswa okuthe ukwehluka ezindaweni ezithile. Sicela uthintane nommeleli wangakini ukuze uqinisekise ukunikezwa komkhiqizo endaweni yangakini.
Khonamanjalo nathi singakunikeza izesekeli ze-formwork systerm, i-plywood yezentengiso, ifilimu ebhekene neplywood njll
We ngokukhethekile professional ekuhlinzekeni antislip plywood.
Ngiyacela xhumana nethimba lethu lokuthengisa ukuthola imininingwane eningiliziwe mayelana nepulangwe lama-Chinese.
Langaphambilini IRocplex Antislip Ifilimu Elibhekiswe KuPlywood
Olandelayo: Plywood Commercial